‘उच्च शिक्षामा सहि व्यवस्थापन र सकारात्मक परामर्श आवश्यक छ’ : आरके ढुंगाना - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘उच्च शिक्षामा सहि व्यवस्थापन र सकारात्मक परामर्श आवश्यक छ’ : आरके ढुंगाना
Posted by Headline Nepal | २ असार २०७४, शुक्रबार १८:१६ |
२ असार, काठमाण्डौँ । सिजी एजुकेशन अन्र्तगत सञ्चालित क्याम्पियन काठमाडौँ सेकेन्डरी स्कुल एक अग्रणी शैक्षिक संस्था हो । यो संस्थाले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ अन्तर्गत व्यवस्थापन र वाणिज्य संकायका कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ ।
यस संस्थामा हाल आरके ढुंगाना +२ कार्यक्रम प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । नेपालको शैक्षिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा उनको अग्रणी भूमिका रहेको छ । प्राज्ञिक प्रतिभाको रुपमा परिचित ढुंगाना प्रभावकारी नेतृत्व र व्यक्तित्वका धनी छन् । विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा कुशल शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा लेक्चरल पदमा रही एक दशक भन्दा लामो समय शिक्षण पेशामा विताइसकेका ढुंगाना Counselor र Motivational Trainer का रुपमा समेत छन् ।
विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाहरुमा आवद्ध भएका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आरके ढुंगानासँग हेडलाइन नेपालका लागि पत्रकार परिवर्तन देवकोटाद्वारा हालै प्रकाशित एस.इ.इको परीक्षाफल, अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको अवसर र चुनौति तथा समसामयिक विषयमा गरिएको अन्र्तवार्ताः
क्याम्पियन काठमाडौँ सेकेन्डरी स्कुलको बारेमा केही जानकारी दिनुहुन्छ कि ?
– चौधरी ग्रुपको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सिजी एजुकेशन अन्र्तगत संचालित काठमाडौँको केन्द्रभाग अर्थात् टंगाल, गहनापोखरीमा अवस्थित शिक्षामा अग्रणी संस्था क्याम्पियन काठमाडौँ सेकेन्डरी स्कुल सन् २००० मा स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि नै क्याम्पियन काठमाडौँले विज्ञान र व्यवस्थापन संकायका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको थियो । नेपालको व्यवस्थापन क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको बलियो आधार निर्माण गर्ने हेतुले Management Faculty अन्तर्गत General Management, Hotel Management, Travel & Tourism र Computer Science संचालन गर्न प्रतिवद्ध छ ।
यस स्कुलले विद्यार्थीहरुको पञ्च पक्ष शैक्षणिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष र भौतिक पक्षको सर्वाङगीण विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र मूल्य मान्यता लाई जोड दिदैँ अगाडि बढेको छ ।
तपाईले भन्नुभयो कि यो संस्था सिजी एजुकेशन अन्र्तगत सञ्चालित छ । सिजी एजुकेशनको बारेमा केही प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
– सिजि एजुकेशन नेपालको अग्रणी व्यापारिक घराना चौधरी गु्रपले पूर्ण रुपमा कर्पोरेट मोडलमा चलाएको संस्था हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था सिजि एजुकेशन फाउन्डेशन अन्तर्गत हालसम्म ११ वटा शैक्षिक संस्थाहरु संचालनमा छन् । यस अन्तर्गत चाँदबाग स्कुल, क्याम्पियन कलेज, क्याम्पियन एकेडेमी, क्याम्पियन काठमाँडौ सेकेन्डरी स्कुल, सिजी पोलिटेक्निकल र दिल्ली पब्लिक स्कुल लगायत संस्थाहरु संचालनमा छन् । समग्रमा सिजी एजुकेशनले कक्षा नर्सरी देखि स्नातकोत्तर सम्मका कक्षाहरु संञ्चालन गदौं आईरहेको छ ।
सिजी एजुकेसन मुख्यतः कुन वर्गलाई लक्षित गरी खोलिएको संस्था हो ?
– सिजी एजुकेसन मूलत सुलभ शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने मूल उद्धेश्यका साथ खोलिएको संस्था हो । यस अन्र्तगतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले मध्यम देखि उच्च आर्थिक वर्गका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेको छ । यसका साथसाथै यस संस्थाले गरिव,निम्न वर्गीय तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्दै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि उत्तिकै सचेत रहदै जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ ।
क्याम्पियन काठमाडौँ स्कुलको विशेषताहरुबारे केही चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि ?
– सिजी एजुकेशनले मूलतः चार खम्बा Academics, ECA/CCA, Discipline र Value Education लाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । क्याम्पियत काठमाडौँ स्कुलले पनि यसैलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको छ । काठमाडौँको केन्द्रभागमा अवस्थित यस संस्थाले विगतदेखि वर्तमानसम्मै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन, तालिमप्राप्त र अनुभवी शिक्षकहरू, खेलमैदान, सवै किसिमका शैक्षिक प्रयोगशाला, पूस्तकालय, स्मार्ट कक्षाकोठासहितको शिक्षण हाम्रा विशेषताहरू हुन् ।
क्याम्पियन काँठमाडौ विद्यालयको शिक्षण पद्धतिका बारेमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि ?
– यस शैक्षिक संस्थाले शिक्षकहरुलाई समयसमयमा प्रशिक्षण प्रदान गरी अहिलेको समयसापेक्ष प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी Project Based Learning, Research work, group discussion, Peer work, open book testलाई अनुसरण गर्दै इन्टिग्रेटेट प्याडागोजिकल प्याराडाइम सिस्टममा पठनपाठन गर्दै आएका छौँ । सिजी एजुकेशन अन्तर्गतका सवै संस्थाहरुले Teaching भन्दा Learning मा बढी जोड दिएको छ । हाम्रो शिक्षण पद्धतिको मूल मर्म भनेको विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्, भविष्यमा सम्बन्धित क्षेत्रमा सहजै आफूलाई विकाउन सकोस् र अरुलाई पनि सफल गराउँदै आफू सफलताको मार्गमा लागोस् भन्ने हो । तसर्थ यस संस्थामा शिक्षकहरु पढाउने मात्र नभइ एक पथप्रदर्शक र सहजकर्ताको रुपमा उत्तम शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापलाई जोड दिने गर्दछन् ।
क्याम्पियन काठमाडौै स्कुलले अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा खेलकुद अन्तर्गत के के गर्नुभएको छ ?
– यस संस्थाले आफ्ना हरेक विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकासमा विश्वास गर्र्दै आएको छ । हामीले हरेक विद्यार्थी Intelligent का साथै Smart पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिदैँ वादविवाद, हिज्जे प्रतियोगिता, सङ्गीत, गायन, नृत्य, बक्तृत्वकता, चित्रकला, प्रतियोगिता, फोटो प्रदर्शनीहरु गराउँदै आएको छ । क्याम्पियनले विद्यार्थीहरु विद्यार्थी जीवनदेखि नै जीवन व्यवस्थापनका सीपहरु सिकुन् भन्ने अभिप्रायले समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, Anger management, प्रस्तुतिकरण, सकारात्मक सोच विकास, सहि बानीव्यवहार, भाषण कला इत्यादी सिकाउन उत्प्रेरणामुलक कक्षाहरु संचालन गर्दै आएको छ । साथै खेलकुदको क्षेत्रमा सिजी एजुकेशनले आफ्नै Footshall Covered Hall मा विभिन्न प्रतियोगिता गराउँदै आएको छ । खेलकुदलाइ प्राथमिकता दिएकै कारण यस संस्थाले बास्केटबल, Cricket, TT मा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरु बनाउन सफल भएको छ । साथै सिजी एजुकेशनले आफु मातहतका संस्थाहरु विचमा समेत विभिन्न प्रतियोगिताहरु संचालन हुँदै आईरहेको छ । जसलाई हामी CG|EIU (CG|Education Inter Unit) कार्यक्रम पनि भन्दछौ ।
संस्थाको+2 Head को नाताले यस संस्थाको +2 कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ त ?
– यो शैक्षिक संस्था नियम, विनियम र पद्धतिमा चल्ने संस्था हो । विद्यार्थी भर्ना कति गर्ने ? कसरी गर्ने ? यस शैक्षिक वर्षको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, आन्तरिक परीक्षा प्रणाली लगायत सवै पक्षको व्यवस्थापन गरिसकेका छौ । हामीले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा गर्ने कार्यक्रमहरुको छोटो अवधि, मध्यम अवधि र दीर्घ अवधिको लागि गरिने सवै शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रम लगायतको योजनाहरु निश्चित गरिसकेको हुन्छौ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै कक्षा ११ को नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने योजनामा छौ । प्रबेश परीक्षाका माध्यमबाट म्यानेजमेन्टका लागि राम्रा र सहि विद्यार्थीहरुको छनोट हुन्छ । सिजी एजुकेशनको छात्रवृति कार्यक्रमअनुसार धेरै विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुन सकून् भनेर यस वर्ष छात्रवृति कार्यक्रमलाई विस्तार गरेका छौ । कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन सुरु भएपछि शिक्षा क्षेत्रका मूख्यतः विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन पक्ष सवैलाई सक्रिय पार्दै विद्याथीैको सुनौलो भविष्यका लागि निरन्तर परामर्श, प्रभावकारी शिक्षणसिकाइ, शिक्षक–विद्यार्थी–अभिभावक अन्र्तक्रिया लाई विशेष कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छौ ।
विद्यार्थीहरुले सिजी एजुकेशन अन्र्तगत सञ्चालित क्याम्पियन काठमाडौँ स्कुल नै छनोट गर्नुपर्ने कारण चाँहि के होला ?
– मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि हाम्रो स्कुलको सवैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी व्यवस्थापन नै हो । विद्यार्थीहरुका लागि यहाँको अर्को आर्कषण भनेको भविष्यमा हामीले तयार गरेका विद्यार्थीहरुलाई हाम्रै सिजी ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न होटल, उद्योगहरु, शेक्षिक संस्थाहरुमा इन्टर्नशिपको अवसरका साथै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु पनि हो जुन अन्य कलेजहरुभन्दा नितान्त फरक र उत्कृष्ट अवसर हो । गुणस्तरीय शिक्षा, प्रयोगात्मक कक्षा, हाम्रो आफ्नै होटल, उद्योगहरुको भ्रमणबाट जीवनकेन्द्रित शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, सहि परामर्श र मार्गदर्शन तथा आर्कषक छात्रवृति हाम्रा विशेषताहरु हुन् । यो भन्दा बाहेक शिक्षालाई गुणस्तरिय र समयको माग बमोजिम परिस्कृत गर्न शिक्षाको सवै निकायमा सहि नेतृत्व,सहि व्यवस्थापन र सकारात्मक परामर्श कार्यक्रमलाई सशक्त पार्न खोजिएको छ । विद्यालयमा दण्डरहित शिक्षण, अभिभावकको चाहना र समयको आवश्यकता अनुरुपको शिक्षण, बालमैत्री शिक्षणलाई प्राथमिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयतालाई शिक्षा सुधारको अंग बनाउदै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षाका लागि ठोस कार्ययोजनाहरु कार्यन्वयनमा भइरहेका छन् ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल हालसालै प्रकाशित भएको छ, यस सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
– हालसालै प्रकाशित परीक्षाफलप्रति मेरो सकारात्मक धारणा छ र विद्यार्थीले हासिल गरेको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि राम्रै छ । यसबाट विद्यार्थीहरुको पढ्ने बानी दिनप्रतिदिन बढेको जस्तो महशुस भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर पनि बढेजस्तो लागेको छ । श्रेणी पद्धतिले गर्दा अहिलेका परीक्षार्थीहरु हतोत्साहित, आत्मग्लानि भएर आत्महत्या जस्तो क्रुर कार्य भएको देखिदैनन् र समग्रमा अहिलेको उतिर्ण प्रतिशत पनि राम्रो छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सक्रियताले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकासको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सवै निकाय तन, मन, बचनका साथ एकताबद्ध भइ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । परीक्षा संचालनका क्रममा देखिने, प्रश्नपत्रमा देखिने त्रुटि तथा परीक्षासम्बन्धी कमिकमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्लस टु स्कुलहरु एसइइको नतिजासँगै नयाँ सेसनको भर्नाको संघारमा छन् । प्लस टु शिक्षाका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकले शैक्षिक संस्था र विषय छनोट गर्दा के के कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ ?
– शैक्षिक संस्थाको छनोट र विषयको छनोट कुनै पनि विद्यार्थीको जीवनको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । शैक्षिक संस्था छान्दा सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? कस्तो समूहले चलाएको हो ? त्यहाँको शिक्षकहरुको टिम कस्तो छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ । गुणस्तर शिक्षकको क्षमतामा पनि भर पर्दछ । कुनै पनि संस्थाको तडकभडक तथा सस्तो प्रचारप्रसारको पछि नलागी त्यस संस्थाको इतिहास, शिक्षणपद्धति अनुशासन र व्यवस्थापकीय पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । शिक्षण संस्था आधिकारिक रुपमा स्वीकृत हो, होइन? इतिहास कस्तो छ ? कस्ले संचालन गरेको हो ? जस्ता पक्षहरुमा समेत विद्यार्थी र अभिभावक सचेत हुनुपर्दछ । विषय छनोटका लागि विद्यार्थीले पहिला आफ्नो सवल र दुर्वल पक्षको लेखाजोखा गर्नुपर्दछ । आफ्नो रुचि, क्षमतालाई जोड दिनुपर्दछ । विगतमा विद्यार्थीहरुले सहि विषय छनोट गर्न नसक्दा बीचमा गएर अलपत्र परेको, विषय परिवर्तन गरेको जस्ता समस्याहरु धेरै सुनिएका देखिएका छन् । भविष्यमा सहि तरिकाले अगाडि बढ्न सकिने गरि अहिले नै शिक्षक वा विज्ञबाट परामर्श लिएर विषय छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ ।
Previous‘धनपति’ को ‘सुख दुःख’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
Next‘खुल्ने छ नेपालमा’ : सन्तोष अधिकारी
तातोपानी सुकेपछि बर्सेनी लाग्ने मेला बन्द
२१ भाद्र २०७३, मंगलवार ११:५०
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी कान्छी उमेदवार कविता !
६ जेष्ठ २०७४, शनिबार २१:४०
ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० हजार बराबरको स्वास्थ्योपचार बीमा अभियान शुरु
२४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०८:४४
सञ्चारकर्मी एम जी एकपछि अर्को गित लिएर बजारमा ! फेरी ल्याए ‘सम्धिनी’
१० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०७:५६